Nke a bụ otú WhatsApp ọhụrụ States arụ ọrụ na ọrụ gam akporo gị | Gam akporosis
Otu n'ime ihe ndị a kacha atụ anya banyere WhatsApp maka gam akporo, ha enweghị obi abụọ ọhụrụ WhatsApp statuses, arụmọrụ ọhụrụ nke ngwa ndị a ma ama dịka Snapchat ma ọ bụ Instagram nwere, na dịka ọ na-adịkarị na WhatsApp, n'otu oge ahụ ha na-ejedebe n'ụzọ nkịtị na -eyingomi ọrụ ndị a na-adịghị ahụkebe site na ngwa ngwa ngwa ngwa ndị ọzọ iji tinye ha dị ka mmelite na ngwa ha. .
Eziokwu bụ na, dịka okwu a ma ama na-ekwu: «Mgbe anwu biara udo), na agbanyeghị na n'okwu a achọtala m nke ọzọ, ya bụ, «Mgbe ichere bịara ụjọ», a general ụjọ kemgbe ọtụtụ ndị ọrụ WhatsApp amaghị ma ọ bụ ghọta ihe ndị WhatsApp ọhụrụ a bụ ma obere obere otu esi eji ma hazie ha dịka mmasị onwe gị. Ọ bụ maka otu ihe ahụ, (maka ihe kpatara na ọbụlagodi ndị maara na m raara onwe m nye nke a na amaghị ihe ọhụrụ nke pụtara na mberede na ngwa WhatsApp ha maka gam akporo jụọ m n'okporo ámá), yabụ ekpebiri m ike a bara uru video nkuzi na nke m na-egosi gị ihe niile banyere ọnọdụ WhatsApp ọhụrụOtu ha si aru oru, ihe ha n’eme karie na ihe nile, ka esi ghazie ha nke oma ka ndi mmadu ichoro na WhatsApp ghari ichota ha.
1 Kedu ihe bụ ọkwa ọhụrụ nke WhatsApp?
2 Kedu ihe m ga - eme iji rụọ ọrụ na steeti WhatsApp ọhụrụ?
3 Budata WhatsApp na Playlọ Ahịa Google
Kedu ihe bụ ọkwa ọhụrụ nke WhatsApp?
Ọhụrụ WhatsApp States bụ ọrụ ọhụrụ agbakwunyere na ngwa WhatsApp anyị, yabụ na ngwa ahụ n'onwe ya isi ihuenyo nke ngwa ngwa anyị ga-etinye ma ọ bụ tinye taabụ ọhụrụ abụọ, otu nwere akara igwefoto nke ga - enyere anyị aka ịkekọrịta onyonyo ọ bụla, vidiyo ma ọ bụ GIF ọ bụla anyị zọpụtara na gallery nke gam akporo anyị, yana kọntaktị ndị anyị họpụtara na nhazi na nhọrọ nzuzo nke ọrụ WhatsApp ọhụrụ a.
Imagesfọdụ ihe oyiyi na vidiyo na a ga-gwa n'ihi niile kọntaktị na anyị họrọ, dị ka a lee ihuenyo zuru oke na eziokwu ahụ dị ezigbo mma, na a ga-ewepụ ha na akpaghị aka site na ọnọdụ ọnọdụ Ọnọdụ ọhụrụ a elekere 24 elechara anya ebipụta ha.
N'etiti Nhọrọ nzuzo anyị nwere ike hazie n'ime ntọala nke taabụ WhatsApp ọhụrụ a, ịnọ na States taabụ site na ịpị ntụpọ atọ ahụ pụtara n'elu aka nri, anyị nwere nhọrọ nhazi atọ:
Kekọrịta na kọntaktị WhatsApp gị niile
Soro kọntaktị WhatsApp gị niile jiri aka gị tinye mgbakwunye ndị ọzọ.
Naanị soro ndị kọntaktị anyị họpụtara n'ime ọnọdụ a nke WhatsApp ọhụrụ
Dị ka ị hụrụ Nke a abụghị ihe karịrị nnukwu ngosi iji gosipụta ma ọ bụ kesaa, "na tiori", ọnọdụ uche gị ugbu a, ọdịmma onwe gị ma ọ bụ ihe na-echegbu gị ma na-atọ gị ọchị, nke mere na kọntaktị niile ịchọrọ, nwee ohere zuru oke na ihuenyo zuru oke na ihe niile ịkekọrịta site na ngalaba ọhụrụ a nke WhatsApp na, dị ka ihe niile ngwa ahụ malite, ha na-enye ọtụtụ ihe ikwu maka ya.
Kedu ihe m ga - eme iji rụọ ọrụ na steeti WhatsApp ọhụrụ?
Nke a bụ ajụjụ nde dollar na nke ọtụtụ ndị ọrụ jụrụla m, ma ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-eso blọgụ site na ozi ma ọ bụ nkwupụta na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche anyị na-esonye, ​​yana mmadụ ọtụtụ ndị enyi na ndị enyi m zutere n'okporo ámá, na mmanya na-a havingụ kọfị ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe m na-aga gaa ulo akwukwo ikute nwa m nwoke.
Isi ihe bụ na rụọ ọrụ ndị a ọhụrụ WhatsApp statuses na onye ọ bụla na-ekwu maka ya, ọ dịghị iwu na ị ga-eme ihe ọ bụlaNaanị jide n'aka na ị nwere ngwa emelitere na nsụgharị ya kachasị ọhụrụ dị wee chere maka arụmọrụ ọhụrụ a ịbịa n'oge na-adịghị anya. Ma nke a bụ mgbanwe nke etinyegoro na nsụgharị ndị ọhụrụ nke WhatsApp, ọ bụ ezie na ọ nwere nkwarụ site na ndabara ruo mgbe WhatsApp na-enyere ha aka na akpaghị aka na n'ụzọ dị egwu site na sava ya. Anyị na-aga ihe yiri nke ahụ mere na mgbe ha nọ n'okporo ụzọ gbagọrọ agbagọ ha malitere iji rụọ ọrụ nke oku olu WhatsApp.
Budata WhatsApp na Playlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nke a bụ otu esi arụ ọrụ na WhatsApp ọhụrụ
Ender Mkpanaka dijo
Kedu mgbe mmelite ahụ ga-erute Venezuela? = (
Zaghachi Ender Rod
5 egwuregwu ohuru ohuru ohuru na gam akporo